Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Safarka firaaqadu waa sharad ammaan u ah Air France
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air France ayaa ku dhawaaqday inay kordhisay jiilaalka oo ah duulimaadyada sida caadiga ah xagaaga-kaliya ka yimaada Paris Charles de Gaulle kuna sii jeeda Seville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba, iyo Krakow.
Ku -ciyaarista safarka firaaqada waxay ka caawin kartaa Air France inay si dhakhso leh u bogsato.
Diyaaraddu waa inay xoogga saartaa waddooyinka waqtiga firaaqada ee mugga badan.
Dadka socotada ah ee doonaya inay ka baxsadaan goobahooda qufulka.
Khamaarka Air France ee marinnada firaaqada ayaa u horseedi kara soo -kabasho deg -deg ah qofka sidda iyadoo safarka firaaqada dibedda ee Faransiiska uu kordhay 74.3% sannadka 2020, in kasta oo xannibaado ay si aad ah u yareeyeen tirada guud ee safarada dibadda ah.
Khubarada warshaduhu waxay xusayaan, iyadoo dalabka safarka ganacsiga la xannibo, in diyaaraduhu ay diiradda saaraan u adeegidda jidadka firaaqada ee mugga leh iyo inay kor u qaadaan kuraasta qaaliga ah safarayaasha miisaaniyadda sare si ay u taageeraan soo kabasho xoog leh.
Faafida hore, safarada firaaqada ee ka baxsan Faransiiska ayaa lagu qiyaasay 72.1% safarada caalamiga ah ee 2019. Kordhinta 2020 waxay muujineysaa in baahida firaaqada ay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah sababaha ugu badan ee socdaalka xilliga soo kabashada degdegga ah iyadoo safarradu raadinayaan inay ka baxsadaan goobaha qufulka.
Intaa waxaa sii dheer, khubarada warshaduhu waxay saadaalinayaan in safarada firaaqada ee ka baxsan Faransiiska ay arki doonaan heerka kobaca sanadlaha ah (CAGR) oo ah 18.9% inta u dhaxaysa 2021 iyo 2025, oo gaari doonta 34 milyan oo safaro madadaalo oo caalami ah marka la gaaro 2025. Tani waxay muujineysaa kartida suuqa firaaqada uu leeyahay iyo in Air France diiradda saaridda jidadka xilliga firaaqada ah ayaa sideeyaha geyn doona meel xooggan. Hordhaca Muscat, Zanzibar, iyo Colombo, iyo sidoo kale duulimaadyo badan oo lagu tago Miami iyo Papeete (Tahiti), dhammaan meelaha xilliga firaaqada diiradda la saarayo, waxay xaqiijinayaan sharadka side-hayaha ee dib u soo noqoshada xooggan ee safarka firaaqada.
Air France ayaa ku dhawaaqday kordhinta jiilaalka oo ah duulimaadyada sida caadiga ah xagaaga-kaliya ka yimaada Paris Charles de Gaulle kuna sii jeeda Seville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba, iyo Krakow.
Iyada oo la ballaadhinayo waddooyinkan meelaha sida caadiga ah loo kululaado xilliga jiilaalka (aan ahayn Krakow), Air France waxay xaqiijinaysaa filashadeeda ah in meelaha la yaqaan, ee xilliga firaaqada diiradda la saari doono. Ra'yi ururin toos ah ayaa muujisay in 41% jawaabeyaasha caalamiga ah ay u badan tahay inay doortaan safaro caalami ah oo ay tagaan isla goobihii ay horay u booqan jireen COVID-ga marka xayiraadaha la fududeeyo. Marka la eego in dariiqyadan la heli karo kahor COVID, waxay ka faa'iideysan karaan rabitaanka sii kordhaya ee dadka safarka ah si ay u booqdaan meelaha la yaqaan. Tani waa tallaabo caqli badan oo ay samaysay Air France maadaama ay ka faa'iideysanayso dakhli dheeri ah iyada oo qancinaysa dareenka suuqa ee hadda jira.
Sida laga soo xigtay ra'yiururin toos ah, 28% jawaabeyaasha adduunka ayaa shaaca ka qaaday in miisaaniyaddooda safarka ay kordheen 'waxyar' ama 'wax badan' tan iyo bilowgii masiibada. Macaamiishaani waa inay noqdaan bartilmaameedka koowaad ee fasalka ganacsiga dheer ee Air France.
U fiirsiga xamuulka ee meelaha firaaqada ah ee meelaha fog-fog ku jihaysan ee jiilaalka wuxuu soo bandhigi doonaa fursad ku filan oo kor loogu qaado waayo-aragnimada dabaqadda ganacsiga si loogu safro xilliga firaaqada, gaar ahaan kuwa leh miisaaniyad sare. Socotada ganacsi ee ka hor COVID waxay ahaayeen laf-dhabarta dakhliga qaaliga ah, laakiin marka dalabka la yareeyo, dadka safarka ah ee firaaqada ah waa inay noqdaan bartilmaameedka koowaad. Fasalka meheradda waa in Air France u dallacsiisaa sidii bilow raaxo leh iyo/ama dhammaad fasax. Iyada oo kor u qaadaysa waraaqaha firaaqada firaaqada, xamuulku wuxuu yareyn karaa luminta dalabka ganacsiga, isagoo ka ilaalinaya luminta dakhliga.